Global Voices teny Malagasy · 12 Novambra 2014
Tantara tamin'ny 12 Novambra 2014
Mediam-bahoaka12 Novambra 2014
Liana tanteraka tamin'ny fiofanana momba ny bilaogy voalohany notontosaina tao Maoritania ireo mpandray anjara. Mpandray anjara efapolo no naniry fatratra nianatra momba ny fomba fibilaogina momba ny olana ankehitriny mikasika ny fanandevozana ao amin'ny firenena.
Fihaonan'ny Global Voices (Meetup) Voalohany Ao Accra, Ghana
Afrika Mainty12 Novambra 2014
Hotontosaina amin'ny Asabotsy 15 Novambra ao Accra ny Fihaonan'ny Global Voices voalohany ao Ghana. Fotoana iray hoan'ireo miasa eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olo-tsotra hizarana traikefa ity.
Tafiditra ao anatin'ny tetikasa Rising Voices Amazonia, hametraka fisiana antserasera amin'ny tenin'izy ireo manokana ny Onjam-peo ao amin'ny fiarahamonina indizeny Achuar sy Shuar ao Amazonia Ekoateriana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Novambra 2014